दलान नेपाल : February 2016
दोहोरो रणनितीमा अघि वढदै मधेशी मोर्चा ।
at 5:55 AM Posted by Dalan
आन्दोलनको स्वरुप वदलेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अब के गर्लान भन्ने जिज्ञासा चौतर्फी व्यापत देखिन्छ । गएको शनिवार बसेको मोर्चाको बैठकले पुन आन्दोलनको रणनिती बनाउनका लागी सचिवालयलाइ जिम्मा दिए पछि थप चासोहरु व्यक्त हुन थालेका छन । मोर्चा सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सचिवालयले पुन आन्दोलन चर्काउने रणनिती बनाइरहदा मोर्चा भन्ने अहिले केहि समय दोहोरो रणनिती अपनाउदै अघि वढने छन । स्रोत भन्छन, काग्रेसको महाधिवेशन पश्चातको राजनितीक घटनाक्रमलाई नियालेर मात्रै मोर्चा एउटा ठोस धारणामा पुग्ने छन । अहिले मोर्चाले साकंतिक रुपमा केहि विरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । शनिवारको बैठकले निर्णय गरे अनुरुप मोर्चाले सम्भवतह यही हप्ताको अन्तिम तिर वा अर्को हप्ताको सुरुवातमै प्रधानमन्त्रीलाइ अल्टीमेटन सहितको ज्ञापन पत्र समेत बुझाउने तयारीमा छन । जसको आन्तरिक गृहकार्य सचिवालय स्तरमा चलीरहेको छ ।
काग्रेस महाधिवेशन पश्चातको सम्भावित आकंलन
आन्दोलनको भावी दिशा वारे सदभावनाको काठमाडौमा अन्तक्रिया ।
at 5:37 AM Posted by Dalan
आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताउदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको एक घटक सदभावना पार्टीले आइतवार काठमाडौमा आन्दोलनको भावी स्वरुप वारेमा अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तक्रिया कार्यक्रममा मधेशवाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुको सहभागीता थिए । कार्यक्रमको विषय प्रवेश गर्दै सदभावना अध्यक्ष महतोले मधेशी जनताहरुको चाहना अनुसार मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गरेको भन्दै मधेशलाई अधिकार दिन जारी आन्दोलनलाई कसरी निर्णयक बनाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा सवै पक्षहरु संग आफुहरु हाल छलफलमा रहेको र त्यही अनुरुप यो अन्त्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका थिए । महतोले हिजो मात्रै मोर्चाको बैठकमा अगामी आन्दोलनको रणनिती वारेमा व्यापक छलफल भएको भन्दै अगामी दिनमा कसरी आन्दोलन पुन उचाइमा पुर्याउदै सफल बनाउने वारेमा गृहकार्य चलीरहेको बताए । अघिल्लो हप्ता मात्रै सदभावना पार्टीको बसेको कार्यसम्पादन समिती समेत यसैसंगै मिल्दाजुल्दो कार्यक्रमहरु ल्याएको समेत महतोले बताए ।
मधेशी मोर्चा आन्दोलन पुन उठाउनका लागी तयारी गर्ने
at 6:18 AM Posted by Dalan
माघको अन्तिम हप्ता ६ महिना लामो आमहडताल र नाका केन्द्रित विरोध धर्ना फिर्ता लिएको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पुन आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन । शनिवार मोर्चाको काठमाडौमा बसेको बैठकले ६ महिना लामो आन्दोलनको क्रममा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा सरकारी तवर र निजी तवर वाट लिने सवै कर, दस्तुर सहितको शुल्कहरु मिनहा गर्न समेत सरकारी सहित अन्य सवै पक्षलाइ भनेका छ । शनिवारको मोर्चाको बैठक पश्चात जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आन्दोलन अवद्यी भरको यातायातमा लागेको जरीवाना, बैकको व्याज मिनहा, विद्यालयको शुल्क सहित अन्य सरकारी कर, दस्तुरहरु नलिने मोर्चा सम्बन्धीत पक्षहरुमा आग्रह गर्दछ । साथै मोर्चाले न्यायीक छानविन समिती गठन गरेर आन्दोलनको क्रममा भएको ज्यादतीको छानविन गर्न समेत माग गरेका छन ।
यस्तो छ मधेशी पार्टीहरुको आन्तरिक लेखाजोखा ।
केहि समय अघि संघिय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यसम्पादन र केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठक संयुक्त रुपमा सम्पन्न भयो । एक हप्ता लामो फोरम नेपालको उक्त बैठक आन्दोलन चलीरहदा पछिल्लो अवस्थाको सम्रग मुल्याकंन गर्दै अगामी रणनिती बनाउदै सकिएको थियो । आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन भए सगै केन्द्रिय कार्यसमितीको विस्तारित बैठक काठमाडौमा गर्नु भन्दा शिर्ष नेताहरु नै मधेश गएर जिल्लाहरुलाई विभाजना गर्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले आफनो बैठक गरेका छन । तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरु हृदेश त्रिपाठी, वृषेश चन्द्र लाल, गोविन्द चौधरी, जितेन्द्र सोनल लगायतका केन्द्रिय नेताहरुको टिम नै मधेश भरी प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महत्वपुर्ण बैठक गरेका छन । यसैगरी गएको चार दिन देखि पछिल्लो परिस्थितीको वारेमा सदभावना पार्टीको कार्य सम्पादन समितीको बैठक बसेको छ । अघिल्लो हप्ता मात्रै तराई मधेश सदभावना पार्टीको समेत कार्य सम्पादन समितीको बैठक भयो । त्यसैगरी मोर्चामा हालै आबद्ध भएका साना पार्टीहरु सहित अन्य सवै पार्टीहरु पछिल्लो परिस्थतीको वारेमा आन्तरिक समिकक्षा र रणनितीहरु बनाइरहेका देखिन्छ ।
दिल्लीमा पक्राउ परेका मधेशी विद्यार्थीहरु रिहा ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ भारतको राजधानी नयादिल्लीमा शुक्रवार कालो भण्डा देखाउन गएको वेला दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मधेशी विद्यार्थीहरु आइतवार रिहा भएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्रवार दिल्ली स्थित नेपाली दुतावास अगाडी कालो झण्डा देखाउने क्रममा मधेशी विद्यार्थीहरु लाइ दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । दिल्ली स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यनरत झण्डै दुई दर्जन मधेशी विद्यार्थीहरुलाई उक्त प्रर्दशनको क्रममा प्रहरी फन्दा भित्र परेका थिए । शुक्रवार पक्राउ परेका मधेशी विद्यार्थीहरुलाई शनिवार दिल्ली प्रहरीले मंगलवार सम्मका लागी भारतको प्रमुख जेल मध्येको एक तिहार जेल पठाएका थिए । दिल्लीमा पक्राउ परेको मधेशी विद्यार्थीहरुलाई तिहार जेल पठाए पश्चात त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । चौतर्फी विरोध हुने क्रम वढे पछि आइतवार भारतीय प्रशासनले मधेशी विद्यार्थीहरुलाई रिहा गरेका हुन ।
आन्तरिक लेखाजोखा गर्दै मधेशी पार्टीहरु ।
at 8:15 AM Posted by Dalan
तमलोपाका नेताहरु वारामा स्थानिय नेताहरु संग छलफल गर्दै
नाका सुचारु भए संगै आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेको मधेशी मोर्चामा आवद्ध सहित अन्य सवै मधेशी पार्टीहरु पछिल्लो समयमा आन्तरिक छलफल तीव्र पार्दै पार्टीको स्थिती सहित आन्दोलन पश्चातको अवस्था वारेमा लेखाजेखा गर्दै छन । गएको छ महिना देखि मधेशमा भएको आन्दोलनको तराई मधेशको स्थानिय राजनितीक सतह मात्रै होइन कि आम मधेशीहरुको राजनितीक मनस्थितीमा समेत व्यापक परिर्वतन आएको वेला मधेशी पार्टीहरुले यस्तो लेखाजोखा गर्न व्यवस्त देखिन्छ । आन्दोलन सुरु भए संगै तराई मधेशमा प्रमुख भनाउदा पार्टीहरु प्रति मधेशमा व्यापक असन्तुष्टि देखिए र तराई मधेशका जिल्लहरुमा ती पार्टीहरु सम्बद्ध मधेशी नेताहरु धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । आन्दोलन चली नै रहदा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विच पार्टी प्रवेशको विषयलाई लिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै सतहमा देखिएका थिए । यद्यपी आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन संगै पार्टी प्रवेशको दौडमा तमलोपा सहित अन्य मधेशी पार्टीहरु पनि देखिएका छन । यो संगै आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन परिवर्तन संगै मधेशी पार्टी आन्तरिक छलफलहरु पनि तीव्र पारेको देखिन्छ । अघिल्लो सोमवार तमलोपाका शिर्ष नेताहरु वारा पुगेर चार जिल्लाका स्थानिय नेताहरु संग बैठक गरे । त्यस लगतै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर जनकपुर तिर पुगेर त्यस क्षेत्रका नेताहरु संग आन्तरिक छलफल गरे भने उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी पश्चिम तिर गएर त्यस क्षेत्रका स्थानिय नेताहरु संग बैठकहरु गरे ।
मधेशमा 'राजनितीक आक्रोश' झनै वढदै
at 6:30 AM Posted by Dalan
मोर्चाले गएको वुधवार जनकपुरमा निकालेको लाठी जुलुस
यो हप्ताको सुरुवाती दिनमा जनकपुर स्थित अंचल अस्पतालको रोडमा विद्युतीय रिक्सामा आफनो गणतव्य तिर गइरहेका राम किशोर सहनीले आफनै अगाडी साघुरो सिटमा बस्न कचकच गरीरहेका एक वृद्धलाई झपार्दै भने, होइन हामी मधेशीहरु सधैको यस्तै नै रहने भयो त ? हेरौ त, पहाडीहरुलाई, हामीले अधिकार माग्दा उनीहरु सवै कसरी एक भएका छन । समान्य किशानी गर्ने सहनी सानोतिनो स्तरका माछा व्यापारी पनि हुन । सहनी ती वृद्धलाई झपार्दै गर्दौ उनको अनुहार राजनितीक चेतनाले चकमन्न देखिथ्यो । उनले थप थप्दै भने, हामी मधेशीहरु जनता देखि नेता सम्म एक ठाउ अझै उभिन सकिरहेका छैनौ अनि कसरी हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ । यत्रो आन्दोलन गर्यौ आखिर सवै पहाडीहरु एक भएर हामीलाई त केहि दिएन नी, उनी गम्भिर र आक्रोशित मुद्रामा परिणत हुदै भने, हामी चाही संसदवादी र गैरसंसदवादीमा अझै पानी वारावार गरेर बसेका छौ । राम किशोर सहनीको तर्क एउटै थियो, हामी मधेशीहरु एक नभएका कारण हाम्रो आन्दोलनलाई काठमाडौले सुनेनन । उनकै छेउमा बसेको मलाई उनले प्रश्न तेर्साए, तपाईहरु पढेका लेखेका मानिसहरु किन यसका लागी मधेशी नेताहरु माथी दबाब दिनु दिनु हुन्न ।
मधेशी नेतृत्वहरुको आलोचना
कसरी खुल्यो विरगंज - रक्सौल नाका ।
at 7:54 AM Posted by Dalan
२५ माघमा १३५ दिन देखि अवरुद्ध रहेको विरगंज रक्सौल नाका सुचारु भयो । मधेशी मोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको १ महिना पछि ६ असोजमा राजविराजवाट नेपाल भारत सिमामा पर्ने नाकाहरु अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरे संगै विरजंग रक्सौल सहितका अन्य नाकाहरु अवरुद्ध हुन पुग्यो । अन्य नाकाहरु दशै आए संगै सुचारु भए पनि विरगंज रक्सौल नाका पुर्ण रुपमा ठप्प रह्यो । समय वित्दै जादा मोर्चाको आन्दोलन पनि विरगंज रक्सौल नाकामै केन्द्रित रहन गयो । तर २५ माघमा मोर्चाको निर्णय वेगर नै उक्त नाका सुचारु भयो, जसले मोर्चा भित्र पनि खैलावैला नै मच्चायो । नाका मोर्चाको निर्णय वेगर नै सुचारु भएको चार दिन पश्चात मात्रै मोर्चाले बैठक गरेर औपचारिक रुपमा नाका केन्द्रित कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णइ गर्यो । उक्त नाका सुचारु भए संगै मोर्चा भित्रको विवाद समेत सतहमा पोखियो र मोर्चाले औपचारिक रुपमा सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो माथी प्रश्न उठायो । किनकी विरगंज नाका सुचारु हुनु एक दिन अगावै महतोले विराटनगरमा विरगंज नाका मात्रै अवरुद्ध गरिरहनुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै गनैृ भए सवै गरौ अन्यथा उक्त नाका पनि सुचारु गरिदिन माग गरेका थिए । त्यसको ठिक एक दिन अगाडी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर विरगंज रक्सौल नाका मै पुगेर मोर्चा सग प्रमुख दलहरुले सहमती नगरुन्जेल समम नाका नखोल्ने वताएका थिए । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि त्यही आश्यका अभिव्यक्तिहरु दिदै आएका थिए । तर विराटनगरमा २४ माघमा सदभावना अध्यक्ष महतोले सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरे संगै २५ माघमा विरगंज नाका सुचारु हुन गयो । सवत्र्र चासोको विषय बन्न पुग्यो, कसरी खुल्यो विरजंग रक्सौल नाका ?
२५ माघको दिन के भएको थियो ?
at 7:13 AM Posted by Dalan
विरगंजमा कर मिनहाका लागी धर्नामा बसेको मधेशी नेताहरु
जनकपुर मिल्स एरीयाका राजु मंडलको हाथमा अघिल्लो हप्ताको सुरुमै विद्युत महसुलको ५३ हजारको विल परे पछि उनी तीन छक्क परे । जनकपुर बजारमा विद्युतीय रिक्सा चलाउने राजु गएको ३ फागुन अर्थात अघिल्लो सोमवार विहान यो संवाददाता संग भने, यो हप्ता भरीमा महसुल तिरिएनन भने सवैको व्याज सहित तिर्नु पर्ने हुन्छ । गएको ६ महिना देखि तराई मधेशमा मधेश आन्दोलन चलीरहदा सरकारी कार्यलयहरु सुचारु नभए राजु जस्तै अन्य सबै समै मधेशका बासिन्दाहरु सरकारी कार्यलय वाट हुने सवै कामहरु गर्न पाएनन । आन्द्योलन मधेशी मोर्चाले गएको साउन अन्तिम हप्ता अनिश्चिकालिन आमहडतालको घोषणा गर्दा अर्कौ पनि एउटा घोषण गरे, असहयोग आन्द्योलन, जस अन्र्तगत सरकारी तहमा तिर्नु पर्ने कुनै पनि कर, दस्तुुर र महसुल नतिर्न उनले आम मधेशीहरुमा अपिल गरे । मोर्चाले आम हडतालकै अन्र्तगत यस क्षेत्रका सवै जसो सरकारी कार्यलयहरु यस विचमा ठप्प थिए । तर एक हप्ता अगाडी मोर्चाले नाका केन्द्रित विरोध कार्यृक्रम सगै आमहडताल र सरकारी कायृलय वन्द लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरे । त्यस लगतै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा सुचारु भएको सरकारी कार्यलयहरुले विगत ६ महिना देखि नै सवै कर, दस्तुर र महसुल लगायतका कामहरुको विल फटाफट असुल गर्ने अघि वढेको देखिन्छ । आम मधेशमा त्यसले ५ महिना देखिको आमहडताल लगायतको आन्दोलन विथोलिएको मनस्थितीहरु थप असहजतामा फसेको छ ।
चौतर्फी असहजताको मार
मधेशी मोर्चामा तीन थप पार्टीहरु थपिए ।
at 6:38 AM Posted by Dalan
आज बसेको मोर्चाको विस्तारित बैठक ।
गएको ६ महिना देखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा ३ ओटा थप मधेशी पार्टीहरु समाहित भएका छन । हिजो मात्रै दोस्रो तहको मोर्चाका नेताहरुको बैठकले मोर्चालाई विस्तार गर्ने निर्णय गर्दौ पहिलो चरणमा संसदमा रहेका तीन ओटा मधेशी पार्टीहरु फोरम गणतान्त्रिक, राष्टिय मधेश समाजवादी पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टीलाई भित्राउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका थिए । त्यही अनुरुप आज बसेको मोर्चाको शिर्ष नेताहरुको बैठकले मोर्चा विस्तारको निर्णयलाई औपचारिकता दिदै उक्त तीन मधेशी पार्टीहरुलाई मोर्चामा समाहित गरेका छन । मोर्चाको आजको बैठक पश्चात जारी गरिएको विज्ञिप्तिमा सात ओटै मधेशी पार्टीहरु मध्ये ६ ओटा अध्यक्षहरुको हस्ताक्षर गरिएको छ । तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव उपचारको सिलसिलामा दिल्लीमा रहेकाले उक्त पार्टीको तर्फवाट वरिष्ठ नेता राम नरेश रायले हस्ताक्षर गरेका छन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा अब महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेश सदभावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्टिय मधेश समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र अनिल कुमार झा नेतृत्वको नेपाल सदभावना रहने भएको छ । आज बसेको मोर्चाको विस्तारित सवै शिर्ष नेताहरुको सहभागीताको बैठकले जारी मधेश आन्दोलनलाई एकतावद्ध भई थप उचाइमा पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको तमलोपाका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए ।
कार्यदल स्तरमा पुन सहमती गर्ने कसरत । मधेशी मोर्चा विस्तार हुदै ।
आफनो नाका केन्द्रित धर्ना र आमहडताल पुर्व नै कार्यदल स्तरमा सहमती गराउन लागी परेको मधेशी मोर्चा अन्नतह असफल भए पश्चात गएको सोमवार मोर्चाले औपचारिक रुपमै नाका र आमहडताल फिर्ता लिदै आन्दोलनको स्वरुप वदल्ने निर्णय गरेका थिए । यद्यपी मोर्चाले अरुद्ध पार्दै आएको विरगंज रक्सौल नाका अघिल्लो शुक्रवार नै खुली सकेको थियो । मोर्चा उच्च स्रोतका अनुसार अघिल्लो शुक्रवार विरगंज रक्सौल नाका खुलाउनु पुर्व नै मोर्चा र सरकारी पक्ष विचको कार्यदल स्तरमा सहमती गर्नै अन्तिम कसरत चलीरहेको थियो । मोर्चा उच्च स्रोत भन्छन, तर दुर्भाग्यवस मोर्चाकै एक घटक सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विरगंज नाका खोल्न सकिने वारे विराटनगरमा सार्वजनिक अभिव्यक्रि दिन पगे । मोर्चा उच्च स्रोत भन्छन, महतोले जानेर त्यो पक्कै बोलेको होईन भनेर हाम्रो पनि बुझाई छ, तर त्यसले कार्यदल स्तरमा विभिन्न दबाबका वावजुद हुन लागेको एउटा सहमती तुहियो र विना कुनै सहमती विरगंज नाका सुचारु हुने अवस्था आयो । मोर्चा उच्च स्रोतका अनुसार महतो काठमाडौमा के भइरहेको छ भन्ने कुरावाट वेखवर थियो, र उहाले यती पनि ध्यान दिनु भएन कि एक दिन अगाडी मात्रै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर किन विरगंज नाकामै पुगेर सहमती नभए सम्म नाका सुचारु नहने किन बोलेका थिए । स्रोतका अनुसार राजेन्द्र महतोले आन्दोलनमा गरेको भुमिकाको स्वयंम तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर आफनो नेताहरु समकक्ष पटक पटक प्रसंशा गरेका थिए । तर उक्त घटना पश्चात ठाकुर पनि कुद्ध भए र यो सम्रग प्रक्रियामा मुछिएको भारतीय पक्ष पनि महतोको उक्त अभिव्यक्तिले चित दुखाउन पुगे । स्रोत भन्छन, पछिल्लो मोर्चाको बैठकमा उपेन्द्र यादवले उनीलाई लक्षित गरेर बनाएको प्रेस विज्ञिप्तीमा ठाकुर सहित अन्य सवै अध्यक्षहरुले त्यही भएर सहि छाप लगाउन पुगे ।
कार्यदल स्तरमा पुन सहमती खोजीदै
मधेशी मोर्चा भित्रको 'सकस'
at 5:45 AM Posted by Dalan
गएको सोमवार मधेशी मोर्चाको बैठक पश्चात जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आफनै एक घटक सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो माथी गरिएको टिप्पणीले मधेशको वौद्धिक वृत देखि राजनिती वृत सम्म चर्चा पाएको छ । मोर्चा भित्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा रहे पनि मोर्चाको तीन ओटा अध्यक्षले हस्ताक्षर नै गरेर यस किसिमको विज्ञिप्त निकाल्नेमा मधेशको आम बुद्धजीवीवृतमा कुनै विश्वास थिएन । तर मोर्चाले गर्यो । उक्त प्रकरण पश्चात सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो स्वयंम र उक्त पार्टीले अहिले सम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैन । तर मधेशको सवै वृतमा त्यसको व्यापक आलोचना चाही भइरहेको छ । स्वयंम हस्ताक्षर गर्ने दलहरुकै नेताहरु अनौपचारिक तहमा संवाद गर्दा मोर्चाले गलत गरेको टिप्पणी गर्ने गर्छन । यो प्रकरणले कुन मोड लिन्छ त्यो अहिले नै भन्न मिल्दैन । तर जानकारहरुका अनुसार मोर्चा भित्र रहेको दुई धारको संघर्षलाई यसले औपचारिक रुपमै लिपीवद्ध गरेका छन । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो विच धेरै अघि देखि नै राजनिती प्रतिस्पर्धाका कारण मोर्चा भित्र पनि यी दुईको टिकाटिप्पणीहरु कहिले काही एक अर्का संग वाझिने गरेका थिए । सदभावना पार्टी सम्बद्ध स्रोत अनुसार यो प्रकरण ले महतो र सदभावना पार्टी मोर्चा परित्याग गर्ने मनस्थिती बनाएका छैन । यद्यपी उनी फेरी आफनै ढंग मधेशमा विभिन्न राजनिती कार्यक्रमहरु लिएर जादै छन । विहिवार सदभावनाले काठमाडौमा उपल्बध भएका नेताहरुको बैठक डाकेका छन । उक्त बैठकले सदभावना पार्टीले मोर्चाले हालै गरेको निर्णय प्रति सम्भतह आफनो औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्छन, सदभावना स्रोत भन्छन, तर मोर्चा छो्डने कुनै योजनामा छैन । मोर्चाको यो प्रकरण पश्चात महतो मोर्चाको विरोध नगरीकन मधेश झरेर आफनो गतिविधीहरु जारी राख्ने र मोर्चा प्रति साइलेन्ट रहन सक्छ । सदभावना पार्टी स्रोत भन्छन, मधेशमा हामी धुम्दा आम मधेशीले मधेशी एकतामा जोड दिएको हामीले पायौ, त्यही भएर हामी मोर्चा फुटाउने खेलमा लाग्दैनौ वरु वृहत मधेशी एकतामा सदभावनाले जोड दिदै आफनो कार्यक्रमहरु लिएर मधेशमा कामहरु गर्ने छन । मोर्चा सम्बद्ध स्रोतका अनुसार फोरम नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सल्लाहमा मोर्चा पछिल्लो निर्णय गरेका थिए । मोर्चाको उक्त निर्णय पश्चात तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समेत मधेशको बौद्धिकवृतमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । मधेशको बैद्धिकवृतमा मोर्चाले उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने आवाज वलियो रुपमा सुन्न पाइन्छ ।
मोर्चा भित्रको सकस
अब के हुन्छ मधेशमा ।
at 5:49 AM Posted by Dalan
गएको साउन अन्तिम हप्ता देखि जारी मधेश आन्दोलन एउटा पुर्णविराम लिएको छ । आन्दोलनरत मोर्चाले आन्दोलन जारी रहेको भन्दै नाका धर्ना, आम हडताल र सरकारी कार्यलय बन्दको कार्यक्रम मात्रै स्थगीत गरेको जनाएको छ । यद्यपी तेस्रो मधेश आन्दोलन अहिलेका लागी सकिएको भन्दा केहि फरक नपर्ला । मधेशी मोर्चा भन्ने विरोध मै रहने छन । तर महत्वपुर्ण पक्ष के छ भन्ने आन्दोलन जुन मुद्धाका लागी भएको थियो त्यसको सम्बोधन का लागी कुनै ठोस प्रयास भएको अनुभित आम मधेशीले गर्न पाएनन । त्यसैले चौतर्फी जिज्ञासा देखिन्छ, अब के हुन्छ त मधेशमा ? मोर्चाले भन्दै आए झै के केहि समय पछि पुन आन्दोलन उठने छन । यी र यस्ता सवालहरु गर्व वोकेर मधेशको भविष्य गुज्रीरहने छन । तर हाल सम्म आन्दोलनको क्रममा देखिएको तथ्यहरु र पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले समान्य रुपमा अब मधेशमा के के हुने छन भन्ने आकंलन चाही गर्न सकिन्छ । विरगंज नाका सुचारु भए संगै मोर्चाको मागहरु काठमाडौको प्रमुख दलहरुले सम्बोधन गर्दैन भन्ने धारणा मधेशमा वलियो रुपमा देखिन्छ । यद्यपी मोर्चा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री आफनो दिल्लीको भ्रमणमा जानु अघि संघियताको सिमांकन परिमार्जनका लागी एउटा राजनिती सयन्त्र बनाउने गृहकार्यमा छन । तर मोर्चा त्यसमा सहभागी हुने छैन । मोर्चाले प्रमुख दलहरुले आफनै तालमा गरेको संशोध नझै त्यसलाई पनि अस्विकार गर्नै पक्का देखिन्छ । त्यसैले सरकारी पक्षको त्यो काम पनि भारतीय पक्षलाई देखाउनका लागी मात्रै सिमित हुन सक्छन । मोर्चा स्रोत भन्छन, हामी आफनो आन्द्योलनलाई आफनै ढंगले जारी राख्ने छौ । मोर्चाको जारी रहने आन्द्योलन अवको केहि महिना त विरोधका लागी विरोधको स्वरुपमै सिमित रहने पक्का छ । तर मधेशलाई त्यतीमै बुझेर अघि वढनु पनि ठुलो कमजोरी हुने कतिपय जानकारहरु बताउछन ।
मधेशमा अब के हुन्छ त ?
मधेशी मोर्चा द्धारा नाका केन्द्रित धर्ना सहित आमहडताल फिर्ता । राजेन्द्र महतोका कारण आन्दोलनलाई क्षती पुगेको मोर्चाको निष्कर्ष ।
at 5:09 AM Posted by Dalan
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गएको ६ महिना देखि जारी आम हडताल सहित नाका केन्द्रित विरोध धर्नाहरु आज देखि औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ । मोर्चाको आज बसेको बैठकले जारी मधेश आन्दोलनको क्रममा जनताको सुझाव अनुसार आन्द्योलनको स्वरुप मोर्चाले परिर्वतन गरेको जनाइएको छ । मोर्चाले नाका केन्द्रित धर्ना र आमहडताल आज औपचारिक रुपमा फिर्ता लिए पनि यस अधि नै नाकाहरु सुचारु भइसकेका थिए भने आमहडताललाई अनौपचारिक रुपमा निप्रभावी बनाइएको थियो । गएको शुक्रवार विरगंज रक्सौल नाका मोर्चाको निर्णय वेगर नै खुले पछि मोर्चाका नेतृत्वहरु दबाबमा परेका थिए । शुक्रवार विरगंज रक्सौल नाका सुचारु हुनु भन्दा एक दिन पहिला गएको विहिवार मोर्चाका एक घटक सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विराटनगरमा विरगंज नाका मात्रै खुल्ला राखी राख्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै बन्द गर्ने भए सवै नाकाहरु बन्द हुनु पर्ने अन्यथा विरगंज नाका खोल्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएको थियो । त्यसको एक दिन अगाडी मात्रै अघिल्लो वुधवार मोर्चाका अर्का घटक तमलोपा अध्इयक्ष महन्थ ठाकुर विरगंज रक्सौल नाकामा पुगेरै तत्कालै नाका सुचारु नहुने बताएका थिए । तर शुक्रवार दिउसो वाट विरगंज रक्सौल नाका सुचारु भए पछि मोर्चाको बैठकको चौतर्फी प्रतिक्षा गर्दै आएको थियो ।
अन्योलमा मधेशी मोर्चा ।
at 7:37 AM Posted by Dalan
शुक्रवार विरगंज रक्सौल नाका सुचारु भए पश्चात अव आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा के गर्लान भन्ने जिज्ञासा चौतर्फी देखिए पनि मोर्चा स्वयंम भन्ने अलमलमा देखिन्छ । मोर्चाले सरकारी वा प्रमुख दलहरुले कुनै प्रकार सम्झौता गरेर वा अन्तयमा त्यो सम्भव नभए मोर्चाको बैठकवाट अल्टीमेटन दिदै तत्कालका लागी विरगंज रक्सौल नाका खाल्ने आन्तरिक तयारीमा थिए । तर मोर्चाको रणनिती असफल हुदै शुक्रवार एक्कासी विरगंज रक्सौल नाका सुचारु भयो । भन्नका लागी विरगंज र रक्सौलको नागरिकको पहलमा उक्त नाका सुचारु गराएको भनिए पनि वास्तवीकमा शुक्रवार भारतीय पक्षको पहलमा नाका सुचारु भएको थियो । मोर्चाको शिर्ष नेताहरु काहा शुक्रवार भन्दा केहि दिन पुर्व नै सरकारी पक्ष सुरक्षा वल प्रयोग रक्सौल नाकामा पर्ने मितेर पुल खाली गराउने योजना बनाएको सुचना आएको थियो । यो सुचना भारतीय पक्ष सामु पनि पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार धर्ना स्थलमा धेरै सख्यामा मधेशी आन्दोलनकारीहरु नभए पनि नेपाली सुरक्षा वलले त्याहाको टेण्ट हटाउदा विरगंजमा पुन तनावको वातावरण सिर्जना हुन सक्थ्यो र सुरक्षकर्मीहरुको रवैयाको आधारमा त्याहा पुन मानिस मर्न सम्भावना हुन सक्थयो । त्यही भएर भारतीय पक्षले मोर्चाको निर्णयलाई समेत नकुर्दै पुल सफा गराए जसले उनीहरुको बुझाईमा पुन मानविय क्षती भएन । भारतीय पक्ष समेत मोर्चाको निर्णय कुरेर नै बसेका थिए, विरगंज स्थ्ति उच्च स्रोत भन्छ, तर नेपाली प्रहरी प्रशासन वल प्रयोग गर्ने अन्तिम तयारी गरीरहेको सुचना पाए पश्चात स्थानिय भारतीय अधिकारीहरुले विरगंज रक्सौल नाकामा पर्ने पुललाई खाली गराए । यसरी मोर्चाले गरीरहेको आन्तरिक तयारीलाई पुर्णतह असफल पार्दै सुचारु हुन पुग्यो विरगंज रक्सौल नाका । तर आफनो योजना असफ भए पछि अव मोर्चा कसरी अघि वढछ भन्ने वारेमा व्यापक अन्योल्ता देखिन्छ । मोर्चाका नेताहरु भन्छन, यो वा त्यो के हुन्छ अहिले नै भन्न गाहे छ ।
तराइ मधेशमा तनाव झेल्दै नेपाली काग्रेस
जारी मधेश आन्दोलनको क्रममा काग्रेस सहित प्रमुख पार्टीहरुको कार्यलयमा व्यापक तोडफोड भएको थियो ।
पार्टीको स्थानिय तहको अधिवेशनका लागी संसदको सवै भन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काग्रेसले तराई मधेशको जिल्लाहरुमा तानव झेल्दै कागजी मै सिमित हुने गरी आफनो अधिवेशनहरु समपन्न गरीरहेको छ । झण्डै ६ महिना देखि आन्दोलनमा रहेको मधेशी मोर्चाको स्थानिय तहमा भईरहेको अवरोध र आन्द्योलनले उत्पन्न भएको असहज परिस्थितीका कारण तराई मधेशको जिल्लाहरुमा नेपाली काग्रेसको महाधिवेशन पुर्ण प्रभावित भएको स्थानिय अगुवाहरु बताउछन । यद्यपी काग्रेसका स्थानिय नेताहरुले अधिवेशन विधिवत रुपमा सम्पन्न भईरहेको दाबी गरेका छन । तराई मधेहशको जिल्लाहरुमा नेपाली काग्रेसको गाउ तह देखि नै अधिवेशन हुदा स्थानिय स्तरमा हुने ठुलो उत्सव जस्तो मेलाहरुको वातावरण बन्ने गथ्र्यो । तर यस पाली स्थानियहरुले चाल समेत पाईरहेको देखिदैनन । स्थानिय अगुवाहरुका अनुसार काग्रेसका नेताहरु यस पाली बन्द कोठामा सिमित आफनो मानिसहरुलाई राखेर जेनतेन अधिवेशन सम्पन्न गराईरहेका छन । महोतरी उद्योक्ष् वाणिज्य संघका पुर्व सभापति समेत रहेका जलेश्वरका स्थानिय व्यापारी दिपु साह भन्छन, हाल जारी काग्रेसको अधिवेशन कागजमा मात्रै भईरहेको छ । बजार, गाउघर देखि सहर वजार सम्म कसैले चाल समेत पाएको छैन, साह भन्छन, काग्रेसी नेताहरु घरघरमा गएर कतिपय ठाउमा हस्ताक्षर गराएर समेत अधिवेशनको कागजी प्रक्रिया पुरा गरेको देखियो ।
मोर्चाको बैठक आउदो मंगलवार बस्दै ।
at 7:43 AM Posted by Dalan
पछिल्लो समयमा अत्यद्यिक चर्चामा रहेको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको बैठक आउदो मंगलवार बस्ने मोर्चा स्रोतले जनाएको छ । यस पटकको मोर्चा बैठक सवै शिर्ष नेताहरुको उपस्थितीमा हुन लागेको छ । पछिल्लो समयमा आन्द्योलन स्वरुप परिर्तनको चर्चा, नाका केन्द्रित धर्ना वारेमा आइरहेको विभिन्न विचारहरुका कारण मोर्चाको आउदो बैठक प्रति सवैको चासो वढेको पाइन्छ । मोर्चा सम्बद्ध विभिन्न घटकका शिर्ष नेताहरुको पछिल्लो समयमा आइरहेको विरोधाभाष किसिमको वक्तव्यका कारण मोर्चाको अगामी बैठक थप चासोपुर्ण रुपमा देखिन थालिएको छ । गत सोमवार मात्रै मोर्चा र प्रमुख दलहरुको शिर्ष नेताहरुको बैठकले दुवै पक्षको कार्यदल व्युताउदै संवाद सुचारु गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर कार्यदलका सदस्यहरु यो विचमा बाहिर रहेकाले कुराकानस् अगाडी वढन सकेका थिएन । मोर्चा स्रोतका अनुसार भोली शुक्रवार देखि दुवै पक्षको कार्यदल स्तरमा पुन संवाद थालिने प्रयासहरु भईरहेको छ ।
कार्यदल स्तरको सहमती मान्न तयार भए मात्रै मोर्चाले नाका केन्द्रित धर्ना फिर्ता लिने ।
at 6:06 AM Posted by Dalan
विरगंजमा आज पत्रकाहरुलाई सम्बोधन गर्दै मोर्चाका एक घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहितका नेताहरु
४ माघमा प्रमुख दलहरु र आन्दोलनरत मोर्चाको कार्यदलले बनाएको सहमती खाका मान्न प्रमुख दलहरु तयार भए संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आउदो बैठकवाट नाका केन्द्रित धर्ना फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार आउदो शुक्रवार वा शनिवार देखि बस्ने मोर्चाको बैठक अगाडी प्रधानमन्त्री देखि प्रमुख दलका अन्य शिर्ष नेताहरुले त्यो मान्न तयार भए उक्त बैठकले नाका केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने छन । यस लागी अनौपचारिक तहमा छलफलहरु उच्च तहमा धनिभुत रुपमा चलीरहेको भए पनि अहिले सम्म कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगि सकेको छैन । प्रमुख दलहरु र मोर्चाको शिर्ष नेताहरुको गएको सोमवार बसेको बैठकले कार्यदललाई पुन व्युताउदै जाहा वाट वार्ता अवरुद्ध भएको थियो, त्यही वाट पुन संवाद थाल्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । मोर्चा उच्च स्रोतका अनुसार कार्यदल स्तरमा भएको सहमतीमा हस्ताक्षर गर्नु पुर्व सरकारी पक्षले नाका सुचारु हुनु पर्ने अडान समेत मोर्चा सामु राखेका छन । मोर्चाले त्यसका लागी हस्ताक्षर हुने ठोस ग्यारेन्टी प्रमुख दलहरुले गरे मोर्चा त्यो गर्न तयार रहेको जनाएका छन ।
कार्यदल व्युताइएको प्रति प्रधानमन्त्री सशंकित । मोर्चा सचिवालयको निष्कर्ष- पुर्व पनि आन्दोलित भयो, थरुहटको नेतृत्व पनि मोर्चाले नै गर्नु पर्ने ।
हिजो सोमवार प्रमुख दलहरु र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको शिर्ष तहको बैठकवाट संवादका लागी पुन व्युताइएको कार्यदल प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संशंकित देखिएका छन । सोमवारको शिर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी थिएन । एमालेको तर्फवाट नेता झलनाथ खनाल सहभागी थिए । मोर्चा उच्च स्रोतका अनुसार सोमवार दिउसो प्रमुख दलहरुको बैठक पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महन्थ ठाकुर विच टेलिफोन संवाद भएको थियो । ओलीले ठाकुरलाई वेलुकि ५ वजे भेटनका लागी समय मागेका थिए । ठाकुरले दिउसो ३ वजे पछि फोन गर्न भनेर ओलीलाई भनेका थिए । तर त्यही विचमा प्रमुख दलहरुको शिर्ष तहको बैठक ३ वजे पुुर्व कुनै तयारी डाकियो । अचानक दुर्व तर्फको कार्यदल पुन संवाद सुरु गर्ने भनेर व्युताइयो । दिउसो ४ वजे सम्ममा प्रमुख दलहरु र मोर्चाले यो कदम चाली सकेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुरलाई भेटनका लागी पुन फोन गर्ने भनेर दिएको वचन त्यस पश्चात शंकामा परिणत भएको मोर्चा स्रोतको बुझाई छ । ओलीले ठाकुरलाई त्यस पछि न फोन गरे नत भेटनका लागी वोलाए । उच्च स्रोतका अनुसार एमाले नेता खनाल उक्त बैठकमा सतारुढ दलहरुको राजनितीक समती सदस्यको हिसावले त्याहा वोलाइएको थियो । त्यो पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई खवर गरेका थिए । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर आइतवार काग्रेस सभापति संग पनि छुटै कुराकानी गरेका थिए । ४ माघमा पनि कार्यदल स्तरको वार्ता अवरुद्ध हुनुमा शिर्ष तहको बैठकमा ओलीले नै नमाने बताए पछि अवसथा विग्रीएका थिए । मोर्चा स्रोतका अनुसार हिजो सोमवार प्रधानमन्त्रीले ठाकुर संगको भेटको समय मागेको केहि घण्टामै उनलाई समेत ठोस जानकारुी नदिई कार्यदल व्युताइएको छ ।
मोर्चा सचिवालयको निष्कर्ष - पुर्व आन्दोलित भयो, पश्चिममा आफै नेतृत्व गरौ ।
प्रमुख दल र मोर्चा द्धारा कार्यदल पुन व्युताउने समझदारी
at 6:59 AM Posted by Dalan
प्रमुख तीन दल र अन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अवरुद्ध वार्तालाई सुचारु गर्नका लागी दुवै तर्फको कार्यदल व्युताउने समझदारी गरेको छ । आज बसेको तीन दल र मोर्चाको शिर्ष नेताहरुको बैठकले कार्यदल स्तरवाट भंग भएको वार्ता प्रक्रिया पुर्न त्यहीवाट सुचारु गर्दै सहमती खोज्ने निष्कर्ष निकालेको आजको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन । गएको ४ माघमा प्रमुख दल र मोर्चाको कार्यदल स्तरको वार्ता सहमती नजिक पुगी सकेको भए पनि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले त्यसलाई अस्विकार गरे पश्चात वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । दुवै तर्फको कायृदलले सहमती खाकाको अन्तिम कसरतमा आफुहरु जुटिरहेको बताइरहदा ४ माघको साझ बसेको प्रमुख दलहरुको शिर्ष बैठक पश्चात वार्ता अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । त्यसको भोली पल्टै मोर्चाको कार्यदलले पत्रकार सम्मेलन गरेर अव कार्यदल स्तरको वार्तामा आफुहरु सहभागी नहुने बताउदै शिर्ष तहमै वार्ता गर्न सुझाएका थिए । तर त्यस पछि प्राय वार्ता हुन सकेका थिएन । प्रमुख दलहरुले त्यस पश्चात एकतर्फी रुपमा संविद्यान संशोधन गर्न पुगे, जसलाई आन्दोलनरत मोर्चाले अस्विकार गर्यो ।